ညလင်းအိမ်: နှုတ်ဆက်စာတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး...
ရေးသားသူ ညလင်းအိမ် at 9:58 AM
အဲလိ်ု မလုပ်ပါနဲ့ ကိုညကောင်းကင်ရယ်..။
ကူးယူလို့မရအောင် လုပ်လို့ရတာပဲ မဟုတ်လား
ကိုညကောင်းကင် စာဆက်ရေးဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ကဗျာဖတ်ရမဲ့ အိမ်တစ်အိမ်တော့ လျှော့သွားပြန်ပြီပေါ့ ။
ညက ဂျီတော့မှာ စောင့်နေပါသေးတယ်။
ကိုယ်ရေးတဲ့စာတွေ ကောင်းလို့လို့ မှတ်လိုက်လေ ..း)
စာကို ကူးလို့မရအောင် လုပ်လို့ရပါတယ်
အဲဒါကို သိတဲ့လူတွေကိုမေးပြီး စာတွေ ဆက်ရေးပါ ..း)
မောင်လေးရေ... ဘာတွေဖြစ်လို့လဲ.. ခံစားချက်တွေနဲ့ ကာရံမိတဲ့ ကဗျာလေးတွေ ဆက်ပြီး ဖတ်သွားချင်ပါတယ်။ အရာရာကို လွယ်လွယ်နဲ့ ဘယ်တောမှ အရှုံးမပေးပါနဲ့နော်..။ ရေးခဲ့သမျှ ကဗျာလေးတွေဟာ တကယ့်ရင်ထဲက လာတဲ့စာကားလုံးတွေဆိုတာ ခံစားတတ်သူတိုင်း နားလည်ပါတယ်။
စာတွေဆက်ရေးပါ.. ကဗျာတွေ ဆက်ရေးပါ..။
အင်း.. အစ်ကို ဘယ်လို ခံစားရမယ်ဆိုတာ နားလည်ပါတယ်.. ဒါပေမယ့် အဲဒီအတွက်ကြောင့်နဲ့တော့ ပိတ်မပစ်လိုက်ပါနဲ့.. ကိုယ်ရေးတဲ့ စာကောင်းလို့ ကူးတာဆိုတော့ ကူးမရအောင်လုပ်ထားလိုက်ပေါ့..း)))
ကူးလို့ မရအောင် လုပ်လို့ ရတာပဲ မဟုတ်လား...
ကျနော်က အိမ်လည်တာ တော်တော် နည်းတယ်... အဲလို နည်းတဲ့ ကြားက လည်နေကြအိမ်တွေ ပျောက်သွားမယ်ဆိုရင် တော်တော် နှမြောရမှာပဲ....း(
မောင်လေးည ခံစားချက်ကို အစ်မကောင်းကောင်းနားလည်တယ်...။ ဘာမဟုတ်တာအတွက်နဲ့တော့လို့ မပြောချင်ပါဘူး...။ ဒီလိုပဲ ကိုယ့်ခံစားချက်နဲ့ အရင်းတည်ပြီး တည်ဆောက်ထားတဲ့ အိမ်တစ်လုံး ကိုယ့်အိုင်ဒီယာကို အခိုးခံရတာလောက်ခံရခက်တာမရှိပါဘူး...။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဘလော့ဂ်ကိုတော့ မပိတ်လိုက်ပါနဲ့... အစ်မစာအုပ်စင်လေးမှာ စာအုပ်တစ်အုပ် လျော့သွားတာ မြင်နေရရင် စိတ်ကောင်းမှာ မဟုတ်ဘူး...။ ပြုသူက သူ့ဘာသာသူ အရှက်ရပါလ်ိမ့်မယ်...။
အကို ရေ ..
ဆိုဒ်တော့ မပိတ်လိုက်ပါနဲ့ ...
မိုးခါး ပြောသလိုပါပဲ ..
စာကို ကူလို့ မရအောင် လုပ်လို့
ရတဲ့နည်းကို အကူအညီ တောင်းပြီး
အကို ရဲ့ စာ တွေ ၊
အထူးသဖြင့် ကဗျာ တွေ က
တော်တော် ဖတ်လို့ ကောင်းတယ် ....
ကိုတူး ထားလိုက်ပါအကိုရာ သူတို့ သမိုင်းသူတို့ရေးနေကြတာ . . . ကူးစမ်းပါစေဗျာ လွတ်ထားလိုက်စမ်းပါ ကူးလို့ ပိတ်ကြမယ်ဆိုရင် စနိင်းနိုင်းစနေတို့ ပိတ်ရတာ ဘလော့စပေါ်ကတည်းကဖြစ်လိမ့်မယ် ဖော်ဝေါ့တောင် ဖြစ်ကြသေးတာပဲ . . .
ဆက်သာရေးကို ဘယ်သူတွေ ကူကြမလဲ ကူကြစမ်းပါစေ လာငြင်းမလားရတယ် ရက်စွဲနဲ့ တင်ထားတာ ကြိုက်သလိုလာ ကြစမ်းပါစေဗျာ . . .
စိတ်ထဲမထားနဲ့ ကိုတူး . . .
ဆက်ရေး . . . .
စာတွေကို ကူးယူလို့မရအောင် ရိုက်ကလစ်ပိတ်တဲ့နည်းနဲ့ ကာကွယ်လို့ရတယ်ဗျ၊ ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီနည်းကို Mozilla မှာ ပြန်ဖွင့်လို့ရပြန်တယ်၊
ဒါကြောင့်မို့ ကူးယူမဲ့လူက ရအောင်ကူးယူကြမှာပါ၊ အထက်က မိတ်ဆွေများပြေသလိုပါပဲ ကိုညကောင်းကင်ရဲ့ ကဗျာတွေက ကောင်းလို့ ကူးတယ်လို့ပဲ ယူဆလိုက်ပါ၊
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုညကောင်းကင်ရေ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ပြီး စိတ်ထွက်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ တံခါးဝကိုတော့ မပိတ်လိုက်နဲ့ဗျ...
ဒီလိုမျိုး အင်တာနက်မှာ စာရေးသူတိုင်း ကြုံတွေ့နေကြတယ်ဗျ၊ ဆက်လုပ်ပါ၊ အားလုံးနဲ့အတူ ကျနော်လည်း အားပေးနေဆဲပါပဲ.... :)
အစ်ကိုက ကဗျာရေးရော၊ စာရေးရော ကောင်းတဲ့ ပါရမီဓါတ်ခံရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုတာ ကျွန်တော်အစကတည်းက သိခဲ့ပါတယ်။
အစ်ကိုရေးခဲ့သမျှ တော်တော်များများဟာလည်း ကျွန်တော့်လိုပဲ ဖတ်သူအားလုံးရဲ့ ရင်ထဲကို ထိရှတာ အမှတ်ပါပဲ...။
စာရေးဖော်ရေးဖက်၊ ကဗျာရေးဖော်ရေးဖက်၊ ဝါသနာတူလူအချင်းချင်း တစ်ယောက်ရဲ့ခံစားချက်တွေကို တစ်ယောက်ကထွင်းဖောက်သိမြင်ပြီးတော့ နားလည်ပေးနိုင်ပါတယ်...။
ကဗျာတွေ၊ စာတွေ ဆက်ရေးပါလို့ လေးလေးနက်နက်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
အားလုံးနဲ့အတူ အားပေးနေတယ် ...။
ဘာပဲ ပြောပြော ဒီကောမန့်ရေးတဲ့ အချိန်မှာ ပို့စ် အသစ်တွေ တက်နေလို့ စိတ်မပူတော့ဘူး။
စိတ်မပူပါနဲ့ဗျာ အချိန်တန်ရင်တော့ အတုဆိုတာ
သူများအခိုးခံရတယ်ဆိုတာ ကောင်းလွန်းနေလို့ ပဲပေါ့။
မကောင်းရင် ဘယ်သူမှ လာမခိုးပါဘူး။
ဘဝမှာ ဓါးရိုးဘက်နဲ့ ကမ်းလာတာတွေရှိသလို
အားပေးစကားလာပြောတာ နောက်ကျသွားလို့ စိတ်မဆိုးကြးနော်။
ရေးပါ ကိုညရဲ့ကောင်းကင်. . .
အခုမှ ကိုဏီ့ ဆီက သိလို လာခဲ့တာ...
ပြောချင်တာတွေကတော့ အများကြီးပဲ ကိုတူး။
ပိတ်တယ် ဆိုလည်း ဘယ်လိုပိတ်ပိတ် ရအောင် ကူးဖို့ နေရာရှိတယ်။ ဒါကြောင့် ပိတ်လည်း ပိတ်မနေနဲ့။ အရမ်းခံစားနေရတယ် ဆိုရင်တော့ pdf ဖိုင်လုပ်ပြီး http://www.scribd.com/ တင်လိုက် ဒါဆိုရင် သူတို့အတွက် နည်းနည်းခက်တာပေါ့လေ။ ဒီထက်ပိုဆိုးလာရင်တော့ print screen ထုတ်ပြီး ကုတ်ခံတင်လိုက်။
ဒါဆိုရင်တော့ Copy နဲ့ လွယ်လွယ်ကူးလို့ မရတော့ဘူးပေါ့။
အကိုလည်း အရင်က အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ခံစားဖူးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း စာဖတ်သူတွေကို အားနာလို့ ရှေ့ဆက်ခဲ့တာ... ဘာမှ လုပ်မနေနဲ့ ကိုတူး...သူတို့တင်ထားတာတွေ့ရင် သွားပြီးတော့ အောက်ကနေ လင့်လေး ချိတ်ပေးပါလို့ တောင်းဆိုကြည့်ပေါ့။ မရရင် ၊ များလာရင် ကိုယ့်နေရာမှာ ပို့စ် တင်လိုက်...ဒီနေရာက ကူးနေပါတယ်ပေါ့။ ဘာဖြစ်လဲ ကိုယ့်နေရာမှာတော့ သုတို့ လာဖျက်လို့မရဘူးလေ..။
ကိုယ့်ဖာသာ ခရီးဆက် ရဲဘော်...